Indlela yokusebenzisa i-Google low quality backlinks ithuluzi lokukhangela?
I-Webmasters isebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokufumana ijusi yekhonkco kumawebhusayithi abo. Ngamanye amaxesha, iindlela zabo azikude kunye nezomthetho. Zonke i-backlinks azidalwanga ngokulinganayo. Njengoko ngokuqhelekileyo kwenzeke, ezinye izixhumanisi zangaphandle zingabaluleka kwaye zifumaneke ngokuchanekileyo, ngelixa ezinye zibonakala zingabonakali kakuhle okanye zisekho.
iGoogle yenza konke okusemandleni ukunika amandla abanikazi bewebhusayithi bakhuphe iinqununu zabo eziphuculweyo kwaye babalekele kwizigwebo. I-Google Disavow Tool ibe yindlela efanelekileyo yokuphuma kubathengisi be-intanethi ukususela ekuhlaziyweni kwePenguin. Ngomnyaka we-2012 uhlaziyo lwe-Google Penguin lugxotha inzululwazi yokupasa injini yosesho kwaye lususa zonke izixhumanisi eziphambili ze-spammy kwii-blog zangasese zamanethiwekhi. Ngaloo nto kudala iingxaki ezintsha kwaye zithintele kakubi ihlabathi lonke le-SEO. Abaphathi beWebhsayithi baqale ukuzama ukusebenzisa kakubi le nkqubo ngokudala i-backlinks spam kwiziza ezigunyazisiweyo, ngenzame yokunciphisa izikhundla zabo kwi-SERP. Ezinye zale migudu yaphumelela. Amanqaku amaninzi achaphazeleka ngempembelelo engalunganga yabaqhubi bawo. Kwabangela umnqweno oqinileyo wokulawula zonke iikhonkco ezibhekisela kwiwebhusayithi. Yingakho i-Google yenze isigqibo sokudala i-Disavow Link Tool ekuncedeni ukunika ithuba kubanikazi bewebhusayithi ukujonga zonke izixhumanisi zabo zangaphandle. Esi sixhobo sokukhangela sasixhasa amaninzi amawaka abanikazi bewebhusayithi ukulawula imeko yabo yangaphambili.
Kutheni sifuna i-Google Disavow Links Tool?
Zonke iinkqubo ze-SEO ze-black-hat zingabachaphazela kakubi iindawo zakho zeendawo kunye nedumela, ngokukodwa ukususela ekubeni i-Google iye yacacisa ukuba iya kuhlawulisa zonke iindawo ezichaphazelekayo nayiphi na inxibelelwano yogaxekile.
Kuninzi abanini bewebhusayithi abanokufuna ukufumana izixhumanisi kwiziko labo ngokuzenzekelayo kwaye bakholelwe ukuba kunokwenzeka ukwenza iprofayile yekhonkco yekhwalithi kwisithuba semini okanye ezimbini. Enyanisweni, nabani na onokukwazi ukuyalela iinkonzo ze-link-building-building kunye nokufumana ama-backlink amatsha kwimithombo yakhe yewebhu ngaphandle kwemizamo. Nangona kunjalo, kuya kuba nefuthe elibi nakweliphi na indawo isayithi yokukhangela injini. Umthombo wakho wewebhu awuyi kulahleka i-rankings ngolo hlobo loxhumo logaxekile, kodwa ukuhlaselwa kogaxekile olude kunye nokuhlala ixesha elide kunokutshabalalisa yonke imizamo yakho ye-SEO.
I-Google Disavow Links Tool yenzelwe ngokukodwa ukunika amandla kumphathi wewebhu ukunika ingxelo kunye nokuthumela izixhumanisi eziphambili ze-spammy kwiGoogle, kwaye ukuba zibethelwa ngabahlaseli bogaxeli be-intanethi yabo ngqo, oku kuya kubanceda baphume kuwo kwaye bahlambulule idumela labo ngokukhawuleza.
I-Google backlink ithuluzi lokutshekisha lifumanisa izixhumanisi zogaxekile kunye newebhusayithi ezakhayo, kwaye kwiimeko ezininzi, abayi kulimaza indawo yakho yesayithi. Nangona kunjalo, imithombo emininzi yewebhu isenokuchaphazeleka yile mi sebenzi yobuqhetseba, kwaye inani labo liyakhula kunye nokuhlaziywa kwePenguin nganye.
I-Google ayiyi kuxabisa i-backlink kuyo nayiphi na iipoleni eziye zabika ukuphumeza i-Google Disavow Links Tool. Esi sixhobo sinceda kuzo zombini iinjini kunye ne-webmasters njengoko kunceda ukwazi ixabiso langempela kuyo yonke imithombo yewebhu kunye nokugweba abaphulaphuli Source .